Shir go’aamo laga soo saaray iyo Gen.Cadde Musse oo magaalada Qardho gaaray • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Shir go’aamo laga soo saaray iyo Gen.Cadde Musse oo magaalada Qardho gaaray
Shir go’aamo laga soo saaray iyo Gen.Cadde Musse oo magaalada Qardho gaaray
December 31, 2012 - By: Khalid Yusuf
Madaxweynihii hore ee Puntland Maxamuud Muse Xirsi (Gen.Cadde Musse) ayaa maanta soo gaaray magaalada Qardho. Safarka Madaxweynihii hore ee Puntland ayaa la sheegay inuu salka ku hayo sidii uu kulamo ulla yeelan lahaa waxgaradka iyo nabadoonada xiligan ku sugan magaalada Qardho.
Booqashada Cadde Musse ayaa kusoo beegmaysa xili maanta waan waan laga dhex waday magaalada waxgaradka ku sugan iyo xubnaha maamulka Puntland kamid ah oo kulan xasaasi ah ka yeeshay xiisad ka dhalatay ciidamo magaalada Qardho ay dowlada geysay maalinimadii shalay.
Nabadoonada iyo waxgaradka magaalada ayaa shalay digniin siiyey maamulka inuusan khal khal ku abuurin degenaanshaha magaalada.
Shirkii Nabadoonada iyo Maamulka Qardho
Maanta ayaa kulan ka dhacay magaalada ayey isugu yimaadeen 25 kamid ah Nabadoonada gobalka, halka dhanka kale ay ka qeyb galeen xubnaha ka socda dowlada Puntland ee xiligan ku sugan magaalada waxaana kamid ah guddiga Amniga Karkaar, oo ay ku jiraan maamulada gobalka iyo degmada iyo saraakiisha ciidamada.
Kulankan ayaa laga soo saaray qodobo ay kamid yihiin:
1- Amaanka magaalada Qardho in la sugo isla markaana aan khal khal la gelin
2- In Shirkii magaalada ka dhacaya ay marka hore ogolaansho siiyaan Nabadoonada.
3- In Ciidamada Dowlada aysan xiri karin qof Muwaadin ah oo aan danbi gelin.
Qodobadan ayey dood weyn ka keeneen xubnaha ka socday dowlada oo si weyn markii hore u diiday qodobka 3aad ayadoo la sheegay in ay jirtay qorshe uu maamulka ku doonayey inuu ku xiro shaqsiyaad ku sugan magaalada Qardho oo dowlada kasoo horjeeda, balse arrintan ayey ku gacanseereen nabadoonada oo sheegay in aan cid danbi gelin lagu xiri karin Qardho.
Sidoo kale xubnaha dowlada ka socday ayaa qodobkii ay wateen oo ahaa in shir magaalada aan lagu qaban karin oo ay fasixi karaan oo kaliya Maamulka, balse qodobkan ayey golaha Nabadoonada bedaleen kana dhigeen in Issimada iyo Nabadoonada ay yihiin kuwa fasixi kara shirkaasi oo aysan dowladu shuqul ku lahayn.
Nabadoonada ayaa maanta ku guuleystay inay baajiyaan shacabka magaalada Qardho oo rabay inay mudaharaad ka dhigaan bartamaha magaalada, mudaharaadkaasi oo looga soo horjeeday hanjabaadyo kasoo yeeray dhawaan maamulka Puntland iyo degmada.